एक्लो, निर्धो व्यक्तिको मूल्य कति ?
कृयाशिल सदस्यताको विवादले महाधिवेशन निधारित मिति गर्न नसक्नु एक परिस्थिति । अर्को परिस्थिति एकै दल एमालेमा नेताका दुई खेमा बीच एकिकरणको कोशिस । यस्तै दलको आधिकारिताको निमित्त निर्वाचन आयोगको पटांगीनीमा हाजीरी । अदालतमा आफ्नै पार्टी पदाधिकारीमा थमौतीको गुहार । यस्तो अवस्थामा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले कुनै पनि जनताको सन्तानलाई सरकार प्रमुख हुने मौका दिएको छ भन्ने खोक्रो दावी ।
के एक्लो निर्धो व्यक्तिको यो प्रणालीमा कुनै मुल्य छ त ?
आपैmले योगदान गरेर बनाएको भनिएको दलले विचल्ली पारेका रामचन्द्र पौडेल, माधवकुमार नेपाल, महन्त ठाकुर आदिको अवस्थाले प्रमाणित गर्छ एक्लो निर्धो व्यक्ति त के कुरा प्रभावशाली मानिएकाहरू पनि मूल्यहिन हुने रहेछन ।
सर्वहारालाई शोषण गर्ने भनेर भनिएका गैर सर्वहारा मध्ये पुँजीपतिलाई दलमा भित्र्याउन पाईन्छ । किनभने नेता ज्यूको अर्थात कमरेड (साथी) नेता ज्यूको वर्गिकरण छ राष्ट्रिय पुँजीपति र दललाल पुँजीपति । चतुरे बाहुनले गोलभेडाको स्वादमा लोभिएर ‘पोस्तकको गोलभेडा पो नखाने’ भने सरह दलाल पुँजीपति पो बार्ने त । अव दलाल पुँजीपति राष्ट्रिय पुँजीपतिको लक्षण सोध्नै पर्दैन । यो त प्रष्ट छ, कमरेड (साथी) नेता ज्यूलाई मनपरेको राष्ट्रिय पुँजीपति मन नपरेको दलाल पुँजीपति । मन पर्न के चाहिन्छ त्यो भने कल्पना गर्नुस् ।
कुनै कारखानाको कम्युनिष्ट मजदुर युनियनले संविधानले दिएको सामुहिक सौदावाजी आफ्नै माउ पार्टीको नेतासँग गर्न पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो कारखानाको मालिक नै उहि हो । यो हो मूल्य व्यक्तिको जसले दलको नाममा परतन्त्र स्विकार गरेको छ ।
गैर कम्युनिष्ट दलहरूले मख्ख नपरे हुन्छ , किनभने यस्ता परतन्त्र ती दलका कार्यकर्ताहरूले पनि भोग्नु परेको छ । दल सिद्धान्त आदिको नाममा सबै थोक त्याग गरेका वफादार भनिनेहरूको थाप्लोमा हिजोसम्म अन्तै रहेकाहरू नेता जीको हातवाट अविर र माला लगाएर टेक्न आउँछन । अर्थात ती वफादारहरू भनेका तरकारी पकाउँदा पहिले तातो तेलको राप ताप व्यहोर्ने तेजपात हुन् । जव तरकारी पाक्छ ती तेजपात झिकेर फालिन्छ । तैयार तरकारी पस्कने वेलामा हालै पार्टी प्रवेश गराइएका धनियाहरू हालिन्छ । सारा श्रेय उनीहरूको नै हुन्छ , वाहवाही पनि उनिहरूकै हुन्छ । तेजपात भुक्किएर रह्यो भने पनि देख्ने वित्तिकै फालिन्छ । यो तेजपात र धनिया उदाहरण सामाजिक सञ्जालबाट साभार हो ।
जव दलका सदस्यहरूको त यो हाल हुन्छ भने, यो मोल हुन्छ भने वर्तमान नेपालमा एक्लो निर्धो व्यक्तिको मूल्य कति होला ? कथं कुनै एक्लोले आफ्नो हक खोज्यो भने प्वाक्क भनिन्छ ‘दल खोलेर आईज’ । अनि यो प्रणालीलाई जनताको सार्वभौमिकता भनिन्छ, लाज लाग्नु पर्ने हो । तर त्यसैको कमी छ नेपाली बुद्धिजीविहरूमा, शरम पचाएर भन्छन् लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ । होला लोकतन्त्रमा यस्तै नै हुन्छ, तर प्रजातन्त्रमा यस्तो हुन्न थियो । एक्लो निर्धोको कुरा पनि सुनिन्थ्यो, त्यसको पनि नागरिक अधिकारको कुरा हुन्थ्यो । कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने लेखेर समान त सबै समान तर केही ज्यादा समान (साभार ः जर्ज ओरवेल) भने जस्तो व्यवहार छ ।
राजाको मान्यतामा भनिन्छ ‘निर्बलश्य बलं राजा’ , अर्थात निर्बलको बल राजा हो । अपवाद घटना छँदैछैनन् भन्ने दावी हैन । तर, त्यो तन्त्र भोग्नेहरूले छातीमा हात राखेर भनुन् चुरोटको खोलमा लेखेर पठाएको पुकाराको पनि सुनवाई हुने गरेको हैन र ? अहिले देश सेवा गर्ने पद आफ्नालाई भागवण्डा गर्ने चलन छैन र ? त्यो भागवण्डामा आफ्नो हुन निमित्त भेटी कवोल्नु पर्ने अवस्था भोग्नेहरूले त्यसो भएको थिएन भनेर छातीमा हात राखेर आफ्नै आत्मालाई भन्न सक्नु हुन्छ, सक्नुहुन्न । तर खोजी गर्नुस् वीपी अपदस्त गरेपछि राजा महेन्द्रले कति वीपीले नियुक्त गरेकालाई वर्खास्त गरे । चाकरी हैन योग्यता खोजेर ल्याएका व्यक्तिहरू अहिले पनि केही जीवित नै हुनुहुन्छ ।
पितृ भएर पिण्ड खानेवेलामा पनि के को आश र डरले चुप हुनुहुन्छ ? भन्नुस् त्यसवेला निर्धाको सहारा राज्य थियो कि थिएन ? भागबण्डा भन्दा योग्यताको कदर थियो कि थिएन ? के अहिले त्यो संभव छ ? निर्धो व्यक्ति एक्लो भएर पनि आत्मसम्मानले बाँच्न पाउने अवस्था छ ? यो अवस्था कायम रहनु पर्छ भन्ने ठानेको भए ठिक नत्र सन्ततिहरूले धिक्कार्न अवस्था होला ।